Archives | November 2019
ဖိုင်တွေကနေ disk ကို / ကနေတစ်ဦးက ISO image ကိုဖန်တီးပေးမထားဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုသူများအပေါ်ဖလှယ်သောရုပ်တုဆင်းတုများ၏အမြောက်အများ - အဲဒီ ISO format နဲ့ကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ ဒီပုံစံကိုသငျသညျ, မှလျင်မြန်စွာနှင့်ကောင်းစွာမဆို CD / DVD ကို disc ကိုကော်ပီကူးဖို့လုံလောက်တဲ့ခွင့်ပြုထားသည်အသုံးပြုသူများကအတွင်းဖိုင်များကိုတည်းဖြတ်ရန်ခွင့်ပြု, က ISO image ကို, သင်တောင်မှသာမန်ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲထဲကနေဖနျတီးနိုငျသောကွောငျ့, ဤအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး!
Archive ရဲ့ရွေးချယ်မှု။ ချုံ့များအတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ပရိုဂရမ်
နေ့သည်ကောင်းသော။ ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာအကြှနျုပျတို့ကို Windows ပေါ်မှာ run နေကွန်ပျူတာများများအတွက်အကောင်းဆုံး Free Archiver ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ သင်မကြာခဏဖိုင်တွေချုံ့အထူးသဖြင့်လျှင်ယေဘုယျခုနှစ်, သမိုင်းပညာရှင်ရွေးချယ်မှု, ကအစာရှောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့်ဒါလူကြိုက်များသည့်ပရိုဂရမ်အားလုံးကိုအခမဲ့ (- က shareware င်ဒါကြောင့်ဒီသုံးသပ်ချက်ကိုအတွက်ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဥပမာတစ်ခုလူသိများတဲ့ WinRAR) လို့ပဲ။
အဘယ်အရာကိုပိုပြီး Archive ဖိုင်ကိုချုံ့? WinRAR, WinUha, WinZip သို့မဟုတ် 7Z?
WinRAR, WinUha, WinZip, KGB Archiver, 7Z နှငျ့ "စစ်တိုက်ရာတွင်သူတို့အစမ်းသပ်ရန်: အဆိုပါကွန်ယက်သည်ယခုလူကြိုက်များမော်ကွန်းတိုက်များစွာနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအစီအစဉ်၏ဖော်ပြချက်ထဲတွင်၎င်း၏ algorithm ကိုအလွန်-အလွန် ... ငါအနည်းငယ်လူကြိုက်များ Archiver ကွန်ရက်အမည်ရယူရန်ဆုံးဖြတ်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည် "အခွအေန။ က Short စကားချီး ... ဖြစ်ကောင်းလည်းရည်မှန်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
Archives - များသောအားဖြင့်သင့်ရဲ့ hard drive ကိုအပေါ်အများကြီးလျော့နည်းအာကာသကြာပေးသောအထူး "ချုံ့" ဖိုင်မှဖိုင်ကိုနှင့်ဖိုလ်ဒါအားမရ၏လုပ်ငန်းစဉ်။ ထိုကြောင့်, မည်သည့်အလတ်စားအတွက်အများကြီးပိုမိုသောအချက်အလက်များတိကျမ်းစာ၌လာသည်နိုင်ပြီးပိုမြန်အင်တာနက်ပေါ်ရှိမှတဆင့်ကူးစက်သောထို့ကြောင့်မော်ကွန်းသတင်းအချက်အလက်များအမြဲဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်!
https://termotools.com my.termotools.com © Archives 2019